Nagarik News - बालबालिकाको मायाले
बालबालिकाका लागि सुन्दर शब्द र सुन्दर संसार पस्किने मध्येमा काओ वेनसुआन पर्दैनन्। बरु उनी गाउँका गाउँ कसरी भोकमरीमा परे अनि बाध्य भएर बसाइँ सर्नुपर्योि, बाढीले कसरी धेरैको जीवन सखाप पार्योल, सलहको विपत्ति कसरी झेल्नुपर्योे अनि मानसिक र शारीरिक अक्षमताको अर्थ के हो जस्ता कठोर वास्तविकता पस्किने मध्येमा पर्छन्।
कठोर वास्तविकता नै पस्किए पनि ६२ वर्षे यी बाल साहित्यकार चीनमा ज्यादै रुचाइएका लेखकमा पर्छन्। गएको अप्रिल महिना मात्र उनले विश्व चर्चित हान्स क्रिस्चियन एन्डरसन बाल साहित्य पुरस्कारबाट सम्मानित भए। नोबेल बाल साहित्य पुरस्कारका रुपमा परिचित यो पुरस्कार पाउने उनी पहिलो चिनियाँ बने।
'काओ वेनसुआनका किताबले मानिसका भोगाइबारे कहिल्यै झूटो बोल्दैनन्,' पुरस्कार छनोट समिति इन्टरनेसनल बोर्ड अन बुक्स फर योङ पिपलले पुरस्कार घोषणा कार्यक्रममा भनेको थियो, 'उनका कथाले जीवन दुखान्तले भरिएको पनि हुन्छ र केटाकेटीले त्यो भोग्नुपर्नेसमेत हुन सक्छ भन्ने प्रष्टसँग देखाउँछन्।'
यी सबै कुरा उनको बाल्यकालका अनुभूतिबाट आएका हुन्। १९५० र ६० को दशकमा पूर्वी चीनको जियाङ्सु प्रान्तमा भएका सामाजिक उथलपुथल र राजनीतिक खैलाबैलाका बीच उनी हुर्किएका थिए।
बेइजिङनजिक हैडियान जिल्लास्थित उनको घरमा न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै उनले भने, 'लेखनका लागि मेरा ती बाल्यावस्थाका सम्झना ठूलो पुँजी बनेका छन्। चीनले हामीलाई थुप्रै हृदय चुँडाल्ने कथा दिएको छ। ती कथा नलेखिरहन म सक्तिनँ। बालबालिकालाई खुसी पार्ने नाउँमा म मेरो जीवनको अनुभूतिलाई बलि चढाउन सक्तिनँ।'
उनको बाल्यकालमा पढ्न स्वदेशी लेखकले लेखेका बालसाहित्य थिएनन्। त्यो बेला बाल साहित्य हुन्छ भन्ने पनि निकै कमलाई थाहा थियो। यो विधा नयाँ थियो। त्यो बेला विदेशी बाल साहित्यकारका कथा मात्र पढ्न पाइन्थे। पछि ये सेङताओको 'डरलाग्दो काग' र बिनसिनको 'यु'वा पाठकलाई चिठ्ठी'जस्ता पुस्तक निस्कन थाले।
उनका बुबा प्राथमिक स्कूलका प्राचार्य थिए र पढ्न प्रेरित गर्थे। उनका हातमा सोभियत बाल साहित्य र चिनियाँ आधुनिक साहित्यका पुस्तक हुन्थे। चीनका प्रख्यात साहित्यकार लु सुनले उनको लेखनी र भावमा ठूलो प्रभाव पारेको काओ बताउँछन्।
किशोर वयमा पुग्दा नपुग्दै चीनमा भएको राजनीतिक तनाव फैलिन थाल्यो र! ६६–७६ सम्म सांस्कृतिक क्रान्ति तन्कियो। कयौं वर्षसम्म विद्यालय बन्द रहे। सरकारी नीतिअनुसार युवा काओले त्यो बेला गाउँगाउँमा क्रान्तिको सन्देश फैलाउने काम गरे। त्यो बेला बौद्धिक जमात, सरकारी अधिकारी र अन्यलाई 'रेड गार्ड'ले निकै सताउँथे। कतिपय अवस्थामा काओ साथीहरुलाई सम्झाउँथे र नसताउन आग्रह गर्थे।
'म त्यो बेला २–३ वर्षको हुँदो हुँ, त्यै भएर हामी त्यति उच्छृङ्खल थिएनौं,' उनले भने, 'हामी पाखुरामा रातो ब्यान्ड लगाउँथ्यौं र राजनीतिक सन्देशयुत्त पोस्टर लेख्ने र टाँस्ने काम गर्थ्यौं।'
पछि उनी जियाङ्स', उनको जन्मथलो फर्किए र स्कूल पढ्न थाले। त्यो बेला गाउँ फर्क अभियान चलिरहेको थियो। जसका कारण उम्दा शिक्षकले गाउँमा पढाउने क्रममा उनले राम्रो संगत पाउन थाले। परिणामस्वरुप सांस्कृतिक क्रान्तिका दौरान उनले उत्कृष्ट शिक्षा पाए।
पछि सांस्कृतिक क्रान्ति उँदोमुख झर्यो तर त्यो बेलासम्म उनी पेकिङ विश्वविद्यालयमा साहित्य विषयमा भर्ना भए, जहाँ अहिले उनी चिनियाँ भाषा र साहित्य पढाइरहेका छन्। पछि उनले पहिलो पटक बाल साहित्यको छोटा कथा संग्रह सन् छपाए। उनका अहिलेसम्म सय भन्दा बढी उपन्यास, छोटा कथा संग्रह, निबन्ध संग्रह तथा एकेडेमिक पुस्तक प्रकाशित छन्।
उनका कयौं कथामा सांस्कृतिक क्रान्तिको पृष्ठभूमिका तनावपूर्ण वर्षहरु गाँसिएर आउने गरेका छन् . उनको पुस्तक 'पित्तल र सूमुखिमा पनि त्यो बेलाको कडा परिश्रम र गाउँका अप्ठेरालाई उन्दै मीठो कथा पस्किएका छन्।
काओ भन्छन्, 'सांस्कृतिक क्रान्ति त कथाको किनारा मात्र हो, त्यो मुख्य विषय हुँदै होइन', तथापि उनले बालबालिकालाई परिस्थितिबारे घुमाउरो तरिकाले बताउँदैनन्। सिधासिधा त्यो बेलाका अप्ठेरा व्यक्त गरिदिन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ चिनियाँ प्रशासनले सुधारिएको संस्करण पढाउँछ। कतिपय हजुरबा पुस्तकका लागि त्यो समय शासनायुक्त समय थियो। त्यसलाई नयाँ पुस्ताले बुझ्न आबश्यक रहेको उनको धारणा छ।
'इतिहासको त्यो समय बंग्याइएको छ,' बेइजिङस्थित एन्डरसन अवार्डका जुरीसमेत रहेका सेवानिवृत्त प्राध्यापक वु किङ भन्छन्, 'काओले भने त्यो समयलाई मानवताको कोणबाट लेख्ने गरेका छन्। उनी राजनीतिक नारा घुसाउँदैनन्। उनी निजी अनुभूीतलाई जस्ताको तस्तो पस्कन्छन्।'
चीनमा यतिबेला बाल साहित्यको निकै ठूलो बजार छ। र चर्को नाफामुलक व्यवसाय बन्न पुगेको छ। काओ र अन्य प्रख्यात बाल लेखकको निकै राम्रो बजार मूल्य छ। काओसँगै याङ होङयिङ र सेन सिसी मध्यमवर्गीय परिवारको विस्तारसँगै राम्रो आम्दानी बटुल्ने लेखकका रुपमा गनिएका छन्। चीनमा बालबालिकालाई बाल साहित्य पढाउने 'फेसन' बढेर गएको छ। यसको फाइदा तिनले पाइरहेका छन्। त्यसैले त काओको उपन्यास 'पराले घर'! करोडभन्दा बढी प्रति चीनमा मात्रै बिकिसकेको चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।
काओले कयौं घरेलु बाल साहित्य पुरस्कार जितिसकेका छन्। उनलाई पुरस्कार दिइँदा कयौं विवाद पनि ननिस्किएका होइनन्। उनका कथामा केटा तगडा हुने, केटी कमजोर हुने र प्रायः पिन्ची हाल्ने चरित्र हावी भएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्। त्यस्ता आलोचनालाई भने उनी वाहियात ठान्छन्।
उमेर बढ्दै जाँदा यतिबेला उनलाई लाग्छ, बाल साहित्यले मावनताको बलियो जग बसाल्नु पर्छ र नैतिकताको आधार बनाउनु पर्छ। यसैका लागि आफुले नियमित रुपमा लेखिरहेको र खासगरी माओकालीन चीनको चित्र प्रस्तुत गर्ने गरेको बताउँछन्। 'भलै त्यो चित्र अहिलेका बालबालिकाका लागि एकादेशको कथाजस्तै किन नलागोस्, म त्यो समय बारम्बार चित्रात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु', उनले भने।
'संसार जहिल्यै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ', उनी थप्छन्, 'फेसनको ट्रेन्ड परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर मानिसले लगाउने लुगा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। मेरो लेखनी पनि त्यही हो। शैली परिवर्तन होला, मैले लेख्ने पृष्ठभूमि फरक रहला तर वैश्विक मुल्य मान्यता र मानवता त्यहाँ हालिएकै हुन्छ।'
खुसी थुनिएको छ, हामी साँचो चिनाइदिन्छौं
संसारभरका चिन्तकहरूले वैकल्पिक सोसाइटीको पक्षमा वकालत गर्दै आए। यो संसार राम्रा मान्छेलाई उपयोगी संसार भएन भन्नेमा आफ्नो मत जाहेर गरे। यो आधुनिक र ‘विकसित' समाज पनि असल मान्छेको लागि उपयुक्त...
तालहरुको वाटिका लेखनाथ नगरपालिका। चिरिच्याट्ट शहर। पोखरा बजारदेखि १० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा अवस्थित लेखनाथलाई सात तालको बगैंचा सहर भनिन्छ। जहाँ रुपा, बेगनास, खास्टे, गुँदे, न्यूरेनी, मैदी र दिपाङ ताल छन्।
प्रकृतिको काखमा ओख्रेनी
एफएम सुनिरहेका कुखुरा! संगीत सबैलाई मन पर्छ। वनस्पति र जीवजन्तुलाई पनि। त्यसैले त दाबा शेर्पाको खोरमा रेडियो घन्कन्छ। साउन ३ गते सुन्दरीजलमाथि मुलखर्क पुग्दा शेर्पाको खोरमा एफएम बजिरहेको थियो।
किन फेरिएन कर्णाली?
सुर्खेत- दुई दशकअघिसम्म जुम्ला, खलंगाका रामकृष्ण बुडथापा आफ्नै खेतबारीमा उब्जेको अन्न खान्थे। उनको दुई रोपनी जग्गामा वार्षिक सरदर १० क्विन्टल धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर फल्थ्यो। पौष्टिक आहारयुक्त खानाले स्वास्थ्य...
जेलका दुई दशक खोतल्दा
मैले नेपाल टेलिभिजनमा 'व्यक्ति–व्यक्तित्व' कार्यक्रम २०५० वैशाखदेखि आरम्भ गरेँ। शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वको जीवनी, उहाँहरूका योगदान र सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग गाँसिएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम समेटेर कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्दा समय र मेहनेतको प्रचुर...
नेपालको झन्डा बोकेर
सपना देख्ने मान्छे सफल हुन्छ। संघर्षका सिँढी चढ्दै चुलीमा पुग्छ। आरोही सञ्जय पण्डित सफलताका सिँढी उक्लिरहेछन्। जुलाई २० मा एल्ब्रुस टाकुरा चुमे उनले। रसियाको एल्ब्रुस युरोप महादेशकै अग्लो चुली हो।